Outsourcing Social Media maka Azụmaahịa
Ntinye aka na mgbasa ozi ọha na eze nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ maka obere ụlọ ọrụ. Ezie na m na-arụ ọrụ site na njiri aka nke onwe, anyị n'eziokwu achọghị ịkọwapụta atụmatụ na akụrụngwa na ụlọ ọrụ mmekọrịta anyị na-elekọta mmadụ Nke ahụ na-agbanwe dịka nke taa, agbanyeghị, ka anyị na-abawanye n'iji Mesie ha ike iji mee ka ndị ọrụ ụlọ ọrụ anyị na-eto eto.
Anyị anwalela ụfọdụ mgbasa ozi mgbasa ozi iji bulie mkparịta ụka anyị n'ịntanetị, mana ọ na-ekwu eziokwu n'eziokwu mgbe niile. Anyị na-achọtakarị mmelite dị egwu, nkwenye ọdịnaya na-adịghị mma, na onyinye mkpokọta zuru ezu. Onyinye onyinye bụ, enweghị nke kachasị, nke kachasị mma anyị ahụgoro ugbu a. Ọ bụ ezie na ọ bụghị atụmatụ mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọrụ a dị n'etiti ebumnuche gị niile. Nye ka ịchọrọ ịmepụta (ndị na-atụ anya ya, ndị na-eme ihe ike, ndị ahịa), yana gịnị ka ịchọrọ ka ha mee?
Ọrụ ahụ mebiri n'ime usoro atọ dị mfe:
Mee profaịlụ - Ekekọrịta ụfọdụ isi Ama na Mesie ha ike ha ga-emepụta profaịlụ ọdịnaya pụrụ iche maka akara gị.
Nata mmelite gị - Ndị ode akwụkwọ dabeere na US ga-emepụta ma zitere gị ọdịnaya mmekọrịta mmekọrịta dị ịtụnanya kwa izu.
Nyocha na nhazi oge - Nyochaa mmelite na mgbe ahụ Mesie ha ike ga-eziga ha na netwọkụ gị maka gị.
Ihe omuma weghaara iji kpoo usoro ihe omuma gi zuru ezu. Malite na nkọwapụta nke ụlọ ọrụ gị na ezigbo onye ahịa, ị gbakwunye akaụntụ mmekọrịta gị niile, gbakwunye akaụntụ ndị ezubere iche nke ndị ahịa, ndị na-eme ihe ike, ma ọ bụ kọntaktị, gbanwee ole ọdịnaya dị na mpụga ma ọ bụ ọdịnaya dị n'ime ịchọrọ ịkekọrịta, nye akụrụngwa kachasị elu nke enwere ike ịgbakwunye na ngwakọta, na isiokwu ị gbadoro anya. Nwere ike ịtọ ụda gị - ma ọ bụ nke na-adịkarị ma ọ bụ nke iwu.
Ọ bụrụ na ị bụ gị n'ụlọnga, ị nwere ike ịmepụta otutu ahịa profaịlụ, họrọ a nnukwu plan, na mgbe na-akụ ọ bụla ahịa na-elekọta mmadụ ọdịnaya na igbunye ugboro ole nke mmelite.
Gbalia igosiputa ihe n’efu!
Nke a abụghị Setịpụ ya ma chefuo ya
Buru n'uche na nke a na - enyere gị aka ịchọta, idozi, ma jikọọ iji akaụntụ mgbasa ozi gị. Ndị ọrụ nọ na ụlọ ọrụ anyị ka na-ekerịta mmelite site na ọwa ụlọ ọrụ anyị, na -ekere mmelite banyere ndị ahịa anyị na ihe ịga nke ọma ha, anyị na-enyocha usoro mgbasa ozi iji zaghachi arịrịọ ọ bụla. Ngwaọrụ dị ka Mesie ha ike na-adịghị pụtara dochie gị dum na-elekọta mmadụ media atụmatụ; ọ dị ebe ahụ iji mee ka ọ dịkwuo elu.
Ngosipụta: Anyị na-eji koodu nkwalite nkeonwe anyị Mesie ha ike, nke na-akwụ ụgwọ na akaụntụ anyị ma ọ bụrụ na ị debanyere aha.
Tags: mesie ikeọpụpụ na-elekọta mmadụna-elekọta mmadụ mgbasa ozioutsourced social media mmelitemgbasa ozi mgbasa ozi
Kesaa akwukwo ahia gi kachasi nma site na Audible